Rag ka Ganacsada Hubka sharci darrada oo malaayiin doollar ku kala wareegsaday Xawaaladaha Soomaalida - Awdinle Online
Rag ka Ganacsada Hubka sharci darrada oo malaayiin doollar ku kala wareegsaday Xawaaladaha Soomaalida
Shirkadaha Xawaaladaha Soomaalida ayaa waxaa la sheegay in sanadihii la soo dhaafay lacag dhan $ 3.7 milyan oo kaash ah u kala qaadeen dad looga shakisan yahay in ay ka ganacsadaan hubka noocyadiisa kala duwan.
Warbixin lagu daabacay Wakaaladda wararka ee reuters ayaa waxaa lagu sheegay in dadkaasi uu ku jiro Nin uu horay Mareykanka cunaqabateyn u saaray oo u dhashay dalka Yemen, kadib markii lagu eedeeyay in uu xiriir la leeyahay kooxaah xagjiriinta.
Warbixinta ayaa sidoo kale lagu xusay in natiijooyin ay soo bandhigeen Koox fadhigeedu yahay Geneva Global Initiative Against Transnational Organised Crime) oo Cilmi baarayaal ah in arrintaan ay sii xoojin karto qorshaha Xawaaladaha Soomaalida ay ku doonayaan inay kula sii Shaqeeyaan Bangiyada Caalamiga ah.
Warbixinta ayaa xuseysa in arrintaan wax laga weeydiiyay Bangiga Dgexe ee Soomaaliya oo ay hoos yimaadaan Xawaaladaha Soomalida in aysan waxba kala socon, hayeeshee ay baaris ku sameynayaan si ilgaara h loogu haayo inay horumar ka sameeyeen ka hortagag waxa dalalka Reer Galbeedka ugu yeeraan Argagaxisada.
Wakaaladda Wararka ee reuters ayaa la xiriirtay Afar Shirkadood oo kamid ah Xawaaladaha Soomaalida, hayeeshee ay u sheegeen inay ka warqabaan macaamiishooda, isla markaana ay ilaaliyaan Shuruucda Caalamiga ah,sidoo kale ay hayaan Magacyada iyo xogta dadka cunaqabateynta la saaray iyo kuwa laga qaaday intabada.
Mashruuca Global Initiative Against Transnational Organised Crime ayaa sheegay in uu ogaaday in lixdii sano ee la soo dhaafay in laga diiwaan geliyay Magaalada Boosaaso ee Gobolka Bari macaamil ganacsi, isla markaana diiwaangelintooda loo maray keydinta taleefoonadooda gacanta iyo in la helo ilaha dhanka Amniga ee Magaaladaas.
Warbixinta Mashruuca Global Initiative oo ay baahisay reuters ayaa lagu cadeeyay in lixdii sano ee la soo dhaafay 176 macmiil inay xiriir la leeyihiin tuhunsaneyaal ka ganacsada hubka Soomaaliya iyo Yemen. Ku dhowaad saddex-meelood laba meelood ayaa ka sarreeyay $ 10,000 oo ah marinka ay tahay in uu u kiciyo warbixin dhaqso ah hay’adaha xakamaynta.
Waxay ka mid yihiin laba wareejin oo wadar ahaan ku dhow $ 40,000 lambarro lala xiriirinayo Sayf Abdulrab Salem al-Hayashi ka dib markii Hanti-dhowrka Mareykanka uu cunaqabateyn ku soo rogay 2017 markii lagu eedeeyay inuu hub iyo taageero dhaqaale siiyay al-Qaacidada Jasiiradda Carabta iyo Dowladda Islaamiga ah ee Yemen, ayaa lagu yiri warbixinta.
Al Hayashi lama helin si uu faallo uga bixiyo.
Amal Express iyo Iftin Express oo fadhigoodu yahay Soomaaliya ayaa wax ka qabtay macaamillada, kuwaas oo adeegsaday Shaabado kala duwan oo isugu jira magaciisa iyo naanaysta, ayaa lagu sheegay warbixinta.
Amal Express waxay sheegtay in warqad wareejin ah oo lagu muujiyay warbixinta oo la sheegay inay xiriir la leedahay al Hayashi ay tahay been abuur. Iftin Express waxay sheegtay in warqada isweydaarsiga ay ahayd mid been abuur ah waxayna intaas ku dartay inay ku wargalisay dhamaan macaamil ka badan $ 10,000 doolar maamulada Soomaaliya.
Warbixinta ma helin wax tusaale ah oo labada shirkadood ee kale, Dahabshiil iyo Taaj, ay ugu wareejiyeen shaqsiyaad kasta oo cunaqabateyn la saaray. Laakiin waxay xustay dhacdooyin ay shakhsiyaadku awood u yeesheen inay kula wareegaan iyaga oo adeegsanaya magacyo iyo tirooyin badan, taas oo xadgudub ku ah sharciga Soomaaliya.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in hal nin uu adeegsaday 24 magac afarta shirkadood.
Dhammaan afarta shirkadood waxay sheegeen inaysan u oggolaan macaamiisha inay adeegsadaan aqoonsiyo badan ama lambarro taleefanno. Shirkadda Dahabshiil waxay kaloo sheegtay inay joojisay xawilaaddii u dhexaysay Soomaaliya iyo Yemen.
Shirkadaha ma aysan sheegin in lixda nin ee warbixinta lagu magacaabay ay ku jiraan keydkooda iyo in kale.
Marka laga reebo al Hayashi – kan kaliya ee cunaqabateynta Mareykanka saaran – seddex kale oo magacyadooda ka muuqdaan dhaqdhaqaaqyo laga shakisan yahay ayaa loo aqoonsaday inay yihiin tuhunsaneyaal ka ganacsada hubka warbixinnada dadweynaha ee guddiga khubarada ee Qaramada Midoobay.
Laba ayaa la calaamadeeyay – mid wakiil al al Hayashi, iyo mid ka mid ah ka ganacsiga hubka – lifaaqa qarsoodiga ah ee warbixintii 2018 ee isla guddiga.
In yar oo soomaalida ah ayaa leh akoonno bangi. Shirkadaha lacagaha xawila – oo badanaa loo yaqaan xawaaladaha – waxay muhiim u yihiin dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo gaarsiinta gargaarka bani’aadamnimada.
Shirkadaha oo laga jaro bangiyada jawaab ma ahan, ayuu yiri qoraaga warbixinta, Jay Bahadur, madaxii hore ee guddiga khubaro ka tirsan U.N. “Marka laga reebo shirkadaha ka socda adeegyada bangiyada caalamiga ah waxay ciqaabi doonaan qoysaska iyaga ku tiirsan isla markaana dhaqaajin doona socodka maaliyadeed ee dhulka hoostiisa,” ayuu yiri.
Laakiin wuxuu yiri shirkaduhu waa inay hubiyaan in wakiiladoodu raacaan sharciyada ladagaalanka lacagta la dhaqay iyo in maamulada Soomaalida ay hagaajiyaan fulinta.
“Hay’adaha nidaamiya maaliyadeed ee Soomaaliya waa shaqaale hoose, oo aan haysan agab dhaqaale, isla markaana aan lagu kalsoonayn hay’adaha maaliyadeed ee gudaha,” ayuu u sheegay Reuters. “Waxay helaan xog kooban oo warbixin ah mana awoodaan inay tallaabo badan ka qaadaan waxa ay helaan.”
C / raxmaan M.Cabdillaahi, guddoomiyaha baanka dhexe ee Soomaaliya, ayaa sheegay in iskaashiga uu soo wanaagsanaanayo. Soomaaliya ayaa kala shaqeyneysa Bangiga Aduunka sameynta kaarka aqoonsiga qaranka, sida uu u sheegay Reuters.
Xarunta Warbixinta Maaliyadeed, oo ah hay’ad dawladeed oo ilaalisa Soomaaliya, kama aysan jawaabin codsiyada faallooyinka ah.
Previous articleDowladda oo si kulul uga hadashay dadkii lagu dilay Shabeellaha Dhexe
Next articleDad ku dhintay Roob dabeylo watay oo ka da’ay Puntland